ethylene glycol (ethylene glycol) inonziwo "glycol", "1,2-ethylene glycol", yakapfupikiswa seEG. Iyo chemakemikari fomula (CH2OH) 2 ndiyo yakapusa diol. Ethylene glycol haina ruvara, isina hwema uye inotapira mvura, ine chepfu kumhuka, uye iyo inouraya muyero wevanhu ingangoita 1.6 g / kg. Ethylene glycol inogona kunyungudika nemvura uye acetone, asi iyo solubility mune ether idiki. Inoshandiswa seye solvent, antifreeze mumiriri uye mbishi zvinhu zvekugadzira polyester. Zvivakwa ...
Zvimiro Kuumbwa: simbi sipo-yakavakirwa musanganiswa weyakagadzirwa syntactantKuonekwa: chena kana yero temaSecurity Nguva muganho: chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mune ine mweya, yakaoma uye isinga gadzire imba yekuchengetera kwemakore maviri. Packaging: yakapetwa kaviri-masiragi epurasitiki mabhegi uye akaumbirwa rakarukwa mapepa mabhegi Net Kurema: 25 kg / bhegi 1. Inogona kudzora Mooney viscosity yerabha remubatanidzwa, kunatsiridza kupararira kwekabhoni nhema uye mumiririri wemubatanidzwa, uye kupa irabha mukomboni pamwe ne bes ...
Jiaoyisan Pr-75 Yekuwedzera Inoparadzira Series
Zvimiro Kuumbwa: simbi sipo-yakavakirwa musanganiswa weyakagadzirwa syntactant. Chitarisiko: chena / yero shava shavi. Kuchengeta Nguva muganho: chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mudura remhepo, rakaoma uye risingakunde kweanogara makore maviri. Kavha: kaviri-rukanda kurongedza kwepurasitiki mabhegi uye rinoumbwa rakarukwa mapepa mabhegi. Kurema kweNet: 25 kg / bhegi. 1.Iinogona kudzikisira Mooney viscosity yerabha remubatanidzwa, kunatsiridza kupararira kwekabhoni dema uye mukomboni mumiririri, uye kupa irabha remubatanidzwa ne ...